I-T Edge Banding Banding - I-China T Profile Edge Banding Supplier, Factory -HengSu Edging
Ikhaya » Imikhiqizo » Amaphrofayli » Amaphrofayli T
I-T Edge Banding Banding
. Uchungechunge iphrofayela babe emapheshana elithambile, emapheshana kanzima, futhi ithambe futhi kanzima emapheshana esiyinhlanganisela strip Soft nge elithambile, uphawu, izici umthelela ukumelana; strip eqinile nakho ngeke kusize has ezihlukahlukene bobunjwa, namandla high, kuyinto ifenisha hardware izesekeli izindlela; itheyiphu kanzima esiyinhlanganisela akhiwa zombili izinhlangothi.
Uchungechunge lwephrofayli lwenziwe ngekhwalithi enhle ye-PVC kanye namathuluzi alungile, Kulula ukushicilelwa futhi sekuyisikhathi eside sokusebenzisa, okwenza kube yinto enhle yefenisha yehhovisi.
Kusukela isikhunta, design, ukukhiqiza futhi adayise, siye iqembu lochwepheshe, Sithatha indima ebonakalayo ngesikhathi izinqubo zethu lonke ibhizinisi kusuka amasampula ekuthunyelweni sokugcina, ukuqapha kokubili izinga umkhiqizo kanye ukulethwa sokugcina isikhathi. Siye, kuyo yonke le minyaka, wasiza eziningi namakhasimende kusuka emhlabeni wonke nge amasu sourcing.Our izimpahla zabo zihlanganisa PVC onqenqemeni nisishiye siboshwé ngebhande, ABS onqenqemeni nisishiye siboshwé ngebhande, Acrylic onqenqemeni nisishiye siboshwé ngebhande, iphrofayela onqenqemeni nisishiye siboshwé ngebhande, imoto zokuhlobisa onqenqemeni nisishiye siboshwé ngebhande, futhi WPC izimpahla. singahlale aim ukuze baveze lokho i-Google + isidingo e imikhiqizo yepulasitiki.
Sisebenzisa imishini ukukhiqizwa obusezingeni eliphakeme izinga izinto zokusetshenziswa nesayensi ukukhiqizwa ubuchwepheshe, isisebenzi sethu sonke cishe babe 10 iminyaka 'ukusebenza isipiliyoni ekukhiqizeni imikhiqizo epulasitiki kanye professional umklami ithimba nosizo ukudayiswa ngamazwe sika, sisuke siqinisekisa ungakwazi ukuthenga zonke izinto ezingaphakathi isikhathi esisheshayo ngamanani okuncintisana kanye ne-100% ikhwalithi eqinisekisiwe esuka lapha.
I-100m / roll, i-200m / roll noma eyakhelwe ngokwezifiso, imiqulu ye-10 ku-carton eyodwa noma eyenziwe ngokwezifiso
Ngolwazi olucebile lokufanisa kombala, manje i-Hengsu manje ingakwazi ukulungisa ngokushesha umbala ngokusho kwamakhasimende 'okufunayo, futhi wenze ngokufanelana nebhodi okusetshenziselwa amakhasimende.
I-1 Q: Ungathola kanjani amasampuli wakho?
A: Singanikeza amasampula wamahala mahhala, udinga nje ukuthunyelwa kwe-pay pay for it.
I-2 Q: Ungathola kanjani isaphulelo sakho?
A: Ungasibiza ku-86-769-22408970 noma uthumele i-imeyili ku-wpc@woodhengsu.com
I-3 Q: Iyini ibanga lobubanzi bakho nobubanzi obukhulu bokubhanqwa kwe-edge?
A: Uhla lwethu lobubanzi luyi-0.4mm-3mm, ububanzi obubanzi yi-12mm-650mm
4 Q: Ungamukela i-OEM?
A: Yebo, singamamukela i-OEM.
I-ABS Yobuningi be-Color Edge Banding
Ukukhishwa kwe-3D Edge
I-PVC Yobuningi be-Edge Banding Banding
Ukukhishwa kwe-Acrylic Edge
Ukukhishwa kwe-PVC Edge
I-ABS Edge Banding